Tsy fandriampahalemana: nirefotra basy, polisy iray maty tsy trandrano | NewsMada
Par Taratra sur 07/01/2019
Rasolonanahary Jacques no anarany. Vao 35 taona ny lehilahy no izao namoy ny ainy tampoka izao. Maty voatifitry ny jiolahy, afakomaly maraina, raha iny izy hamonjy fodiana, avy nanao ”patrouille”, ka nihazo ny lalam-pasika, eo anoloan’ny fiangonana Fjkm, Tanamborozano, Toamasina iny.
Nirefodrefotra indray ny basy tao amin’ny fokontany Tanamborizano Toamasina, omaly maraina tokony ho tamin’ny 2 ora sy 30 minitra . Maty tsy tra-drano Rasolonanahary Jacques, 35 taona, polisy vao nivoaka ny taon-dasa teo ary vao ny volana janaory 2019 ity vao handray ny giradina tsipika roa AP1, raha ny loharanom-baovao.
Voalaza fa polisy vao nahavita ny anjara asany avy nanao “patrouille” i Jacques ka hamonjy fodiana ary nihazo ny lalam-pasika eo anoloan’ny fiangonana FJKM ao Tanamborizano
tsy lavitry ny sekoly lisea tsy miankina Stela Maris. Nifanehatra tamin’ny jiolahy tsy fantatra isa izy. Nihevitra ireto farany fa polisy hisambotra azy ireo ka izy nanao tifitra variraraka tamin’ny Kalakcnikov. Nahavoa ilay polisy io ka nitarika ny fahafatesany.
Raha ny tombantombana, jiolahy handeha hanatanteraka asa ratsy ny nifanehatra tampoka taminy teo amin’ny lalan-kely ary nandeha moto rahateo izy ka nahatonga ireo jiolahy nanao tifitra variraraka izany. Nandalo teo ambanin’ny helika ny bala, nivoaka tany an-damosiny. Tsy nisy sahy nivoaka ny manodidina raha tsy efa nazava ny andro ary teo ny nahitana fa hay polisy monina sy mipetraka amin’ny fokontany ihany ity nisy nitifitra. Mbola hita teo aminy kosa ny basiny sy moto-ny ary ny findainy.
Lasibatry jiolahy ny polisy
Angom-baovao teny anivon’ny polisi-pirenena ny nahalalana fa lasa lasibatry ny jiolahy ny polisy ankehitriny. Ity loharanom-baovao ity izay nilaza fa vokatry ny baiko niainga eo anivon’ny fari-piadidiam-paritanin’ny filaminana anatiny mandrara ny polisy tsy hitifitra fa hanao sambom-belona hatrany ka izao mivadika amin’ny polisy indray ny matin’ny tifitry ny
jiolahy. “Teo, ohatra, ny “Raharahan’Ambodihazinina”, ny polisy maro vaky trano sy very moto ihany koa”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Mialoha ny niaingan’ny razana ho any Tanambe Ambatondrazaka, lalam-pirenena faha-44, nentina nandalo tao amin’ny biraom-paritry ny filaminana anatiny Toamasina ny razana nahafahan’ireo polisy namany namangy sy nanao veloma farany azy.
Taratry ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina rahateo izao tranga izao ary manana fahasahiana tanteraka ireo olon-dratsy noho ny voalaza etsy ambony ary sahy mihitsy mihantsy polisy. Ankoatra io raharaha famonoana polisy io, trangana tsy fandriampahalemana nampivarahontsana ny mponina ao Toamasina ilay fanafihan-jiolahy 20 lahy ny tokantrano iray ao Antseranampasika. Tsy vitan’ny entana maro lasa fa mbola nopotserin’ireo jiolahy ihany koa ny ilamason’ilay raim-pianakaviana tompon-trano. Poaka tanteraka. Mandeha ny fanadihadiana.